Da'da Dijital Ah Wax Walba Way Beddelaysaa | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 11, 2014 Khamiista, Diseembar 11, 2014 Douglas Karr
Markii aan la hadlo shaqaalaha da'da yar, waa wax lala yaabo in laga fikiro in aysan dib u xasuusan maalmihii aan Internetka lahayn. Qaarkood xitaa ma xasuustaan ​​waqti iyaga oo aan haysan taleefan casri ah. Aragtidooda ku saabsan tikniyoolajiyadda ayaa had iyo jeer ahayd inay sii socoto inay sii socoto. Waxaan soo marnay muddo tobanaan sano ah noloshayda halkaasoo horumarka tikniyoolajiyaddu degtay… laakiin taasi maahan kiiska hadda.
Waxaan xasuustaa inaan si cad uga shaqeynayay 1 sano, 5 sano iyo 10 sano saadaalin meherado ganacsi oo aan ka shaqeeyay. Hadda, ganacsiyada waxay ku jiraan waqti adag inay arkaan waxa dhacaya usbuuca soo socda - ha xusuusan sannadka dambe. Goobta tikniyoolajiyada suuqgeynta, horumarka aan caadiga aheyn wuxuu sii wadaa doorka, ha ahaato aaladaha xisaabinta shaqsiyadeed, xog weyn, ama si fudud isugu biiritaanka iyo isku dhafka. Wax walba way socdaan oo shirkado aan lahayn kalsooni ay ku beddelaan ayaa si dhakhso leh looga hadhaa.
Hal tusaale caan ah waa warbaahinta. Wargeysyada, fiidiyowga iyo warshadaha muusikada dhammaantood waxay ku dhibtoodeen inay u yimaadaan xaqiijinta in macaamilka ama ganacsigu ay ka heli karaan waxa ay waligoodba uga baahdaan khadka tooska ah, waxayna u badan tahay inay ku helaan lacag yar ama lacag la'aan maxaa yeelay qof ayaa diyaar u ah inuu siiyo wax ka yar. Taliska monolithic-ka iyo xakamaynta boqortooyooyinkii la dhisay mar dambe ma awoodo inay sii wataan qabsashadooda nasiibkooda. Oo tan iyo markii ay ka maqnaayeen aragtida ah inay maal gashadaan da'da dhijitaalka ah, nasiibku wuu iska siibtay. halka rabitaanku si dhab ah u kordhay!
Ma dhamaan, in kastoo. Badanaa ma wadaagno faahfaahinta tiknoolajiyada, laakiin waxaan aaminsanahay isbeddellada sii kordhaya ee ka soo baxa sawirradan Needa Jeexjeexa wuxuu tilmaamayaa xoogaa horumar ah oo ay tahay inay saameyn ku yeeshaan aragtidaada ku saabsan sida ganacsiyadaadu u shaqeyn doonaan mustaqbalka. Dabcan, taasi waxay saameyn ku yeelan doontaa dadaalka suuqgeynta sidoo kale.
Tags: Daabacaadda 3dfalanqaynta saresaadaasha ganacsigasaraakiisha xogtamadaxda saraakiisha digitalxisaabinta macmiilkadaruur Kombuyuutaradaxisaabinta meel kastanidaamyada qaniga ku ah macnaha guudtubbo darylinfographickaabayaashainternet ee waxfalanqaynta aan muuqanbaahijeexjeexyada needafalanqaynta baahsanamniga halista ku saleysanaaladois-ilaalinmashiinada casriga ahbarnaamijyada lagu qeexay barnaamijyadainternetka waxyaabahaIT-ga
11, 2014 at 11: 19 PM
Infograafigu waa mid weyn !!!
Jawaabaha aayadaha saadaashu waa kuwo heer sare ah. !!!!
Yups mustaqbalka baahida loo qabo suuq geynta dhijitaalka ah wuu yaraan doonaa tartankuna wuu sii kordhayaa.